Duqa Magaalada İmamoğlu: 'Qiimaha Suaalaha Ilkaha Istanbul' Mark RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDuqa Magaalada İmamoğlu: 'Qiimaha Channel Channel Su'aalaha Mark'
Kanaalka ayaa la qaban doonaa marka la gaaro hindisada Istanbul
Duqa Magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu, Sultanbeyli'ye 20 ayaa booqasho ku tagey degmada gobolka. Imamoglu, suxufiyiintu waxay kajawaabeen su’aalo intii lagu gudajiray dib u eegistiisa gudaha ee Sultanbeyli
Kanal For kanaalka Istanbul, kaasoo maalgelintiisa laga wada hadlay, Mr. Wasiir wuxuu yiri shalay ‘15 bilyan doolar’. Horey 75 bilyan oo rodol ayaa loo hadlay. Ka waran calaamadaha su’aashan ee ku saabsan maalgalinta? Warbixinta EIA, haddii Channel Istanbul ay dhacdo, waxaa jira meela loogu tala galay in laga wareejiyo gobolkaas. Sidee uga hadli doontaa xaafadahaas? Sababta oo ah waxaa la sheegaa in ay jiraan cabashooyin aad u badan oo ka jira aagagga la wareejiyay… ”
Hal mar '75 bilyan oo rodol' ayaa loo yeedhay. Hal mar waxaa loo yaqaan '$ 20 bilyan.' Hadda waxaa loo yaqaan '$ 15 bilyan'. Mudane wasiir, hal qof ayaa weydiiya; Immisa mitir oo cubic oo qoditaan ah ayaa la sii dayn doonaa, waa immisa qiimuhu? Taasi waa inta biriijka la dhisi doono, qiimaha qaybta iyo isugaynta qiimaha guud. ' Waxaad tahay qof sare. Dalkani wuxuu leeyahay qandaraasleyaal, dad farsamo yaqaan ah oo ka sameeyay balaayiin doollar ganacsiga. Hal mar, qiimaha ayaa ku kacaya hal maalin. Waa maxay sababta ereyada wareega? Dalkani wuxuu leeyahay balaayiin doolar ganacsiga, qandaraaslayaasha, shirkadaha lataliyaasha, dadka farsamada. Waa maxay sababta ereyada wareega? Tani ma gabal keega ah? $ 15 bilyan, $ 20 bilyan, $ 75 bilyan… Mawduucaani ma ahan ciyaarta ilmaha. Tani waa arin culus. Waa arin ay qayb weyn oo ka mid ah dadka reer Istanbul ka soo horjeedaan. Qiimaha qiyaastii 'shan bilyan doolar sanadkii ayaa dakhli ka heli doonta maraakiibta' ayaa la yiri. Maxaan dhihi karaa? Ma aaminsani hadalada xanafta leh ee wasiir aaminsana inu ina adeer u yahay inuu wadada ka talaabayo nus-saac. Noo ogolow, dadka reer Istanbul, hay'adaha, qiimaha garaaca. Aynu aragno qiimaha? Ma dhabbaa mise waa? Waa maxay kharashyada kale ee dhismaha? Waxa jira in kabadan hal milyan oo magaalo oo loo qorsheeyay. Fikradayda, tiradan ayaa ka badan, 1 milyan.
Waan kuu sheegay. 'Ganacsigani wuxuu kor u kacay illaa boqol bilyan, laba boqol oo bilyan oo shaashadda ah muu badbaadin doonin' waxaan idhi. Waxaad arki doonaa. Si wada jir ah ayaan u arki doonnaa sida qiimaha sare uu u kacayo. Qiimaha aan la saadaalin karin ayaa sidoo kale laga saaray. Gaar ahaan haddii aad dhigtay shaqada dhulka iyo kaabayaasha gudaha, haddii aysan jirin macluumaad la taaban karo oo ku saabsan lakabyada dhoobada ka hooseeya labaatan soddon mitir, Ilaahay ha barakeeyo magaalada! Ilaahay ha ku barakeeyo arimo badan, laakiin taasi waa dhinaca qiimaha. Sidaa darteed, tirooyinkaan qiimahoodu maahan wax macquul ah, waxaa jira aragti ka fog mabda'a macluumaadka furan ee dadweynaha, si dadka looga dhigo jahwareer iyagoo lambar maalin walba kala baxa. Intaa ka dib, waxaan sameyneynaa dhaleeceyn badan oo la taaban karo. Lacag la wareegitaan ah, tani waa bilowga dadka ka socda xaafadooda, meelaha ay ku nool yihiin. Qayladaasi waxay ka heli doonaan boqolaal kun. Waxaan ku aragnaa khariidadda halkaas. Waxaan ku aragnaa Küçükçekmece, Başakşehir iyo Arnavutköy khariidada.
Tani waa bilowgii. Waad arki doontaa oohin. Maaddaama dadku ku noolaayeen guryahooda konton sano iyo boqol sano, waxay sidoo kale ka iibin doonaan dadka ku riyooda 'Halkaas tag, dhisto guryo iskaashi leh oo guri dhisi'. Markii dhinacan laga wada hadlay, warbixintii EIA waa la laalaaday, hadda qorshooyinka waa la hakiyey warqad waraaqaha lahaanshaha ayaa isla markiiba la qoray. Warka? Wax sidan oo kale ah ma dhici karaan? Turkey iyo Istanbul si ay degtey, habka a mashquul in aroortii ilaa tan iyo fiidka, si ay u sii maanka. Dadka ku nool Sultanbeyli waxay leeyihiin dhibaatooyin camal sannado. Dadku waxay halkan ka shaqeynayeen muddo 30 sano ah xalka. Inaad lahaato meesha, inaad lahaato buulkeedii. Waxaad ka timid meeshii ay ku noolaayeen 30 sano, "Kaalay bye", waxaad dhahdaa. Ma aha meeshan, meelaha la door bidaa. Waxyaabahan ayaan ahayn wax fudud. Dadka ka kaxee meeshooda oo dib u soo celi. Tani ma gabal keega ah? Inta ay wax yar u egyihiin. Kani waa dhaawac gooni ah. Haddii howsha channelku sidan u sii socoto, waxaan maqli doonaa boqolaal kun oo dad ah oo qaylinaya. Waxaan rajeynayaa inaysan taasi dhici doonin. Waxaan rajeynayaa in tani aysan shaqeyn doonin. Waxaan rajeyneyaa inay tani soo noqon doonto. Turkey waa in Istanbul oo ku hadlaya magaca ka wakiil on dhaawac oo ah ayuu yiri.
N Maxaa lagu falanqeeyey kulankaaga Suldaanbeyli? Go'aanno muhiim ah ma loo qaatay Sultanbeyli? Ma haysaa wax mashruuc ah oo aad mustaqbalka ku imanaysid Sultanbeyli? ”
Kulankii aan maanta qabanay waa isuduwidda wada shaqeynta ee aan la leennahay degmooyinka. Maanta, waxaan la yeelanay wada-hadal iyo iskaashi aad u muhiim ah oo aan la yeelanay Duqa Magaalada Sultanbeyli. Halkan, mashaariicda hadda jira ee Magaalaweynta, shaqooyinka aan la dhammaystirin, dhimman, ee horey loo qaabeeyey laakiin aan weli shaqooyinka la bilaabin ayaa looga wada hadlay. Kuwaas waxaa ka mid ah gaadiid, habka cusub ee metroolada Çekmeköy-Sultanbeyli metro. tus Waxay soo gudbiyeen dhibaatooyinkooda ku saabsan khadadka IETT. Si aan si firfircoon uga hawl galno xallintooda, isla markiiba waxaan uga tagnay saaxiibkeen mas'uul ka ahaa IETT, miis ayaa la diyaariyay wayna shaqeynayaan. Toddobaad gudihiis, mas'uuliyiinta labada dhinac ayaa isu imaan doona oo xal u heli doona arrimaha gaadiidka. Gaar ahaan bariga magaalada Istanbul, dhinaca Anatolia, ka dib markii Marmaray iyo tareenka dhulka la galay, waxaan ogaanay in dadku ay dhibaato ka haysato inay ku xiriirto khadka waqooyi-koonfur. Waxaan siinay war wanaagsan. Shaqada isaga ayaa ku jirta wajiga ugu dambeeya. Gaar ahaan asxaabteena aad bay u xiiseeyaan Sultanbeyli. Nidaam ayaa jira oo u suurtagelinaya muwaadiniinteenu inay gaaraan tareenka dhulka hoostiisa mara ama tareenka ee ay raacaan basaska IETT iyo inay ku wareejintooda lacag la'aan ah. Tani waxay noqon doontaa mid midho badan u leh Sultabeyli. Waxaan siinay warka wanaagsan. Wuxuu ku sii jeedaa dhanka UK UK. Wakiillada qolka ayaa joogay. Waxay ahayd mid dimuqraadi ah, Mudane Madaxweyne. Wuxuu ku casuumay duqa magaalada. Waxaan yeelanay kulan aad u miro dhal ah.
Ku-Xigeenka CHP-da Raisal Wasaaraha 11 ee ku saabsan Istanbul Channel
Kharashaadka Channel Istanbul waa saddex laab
Mayor Topbaş oo ka hadlayay baaritaanka barafka ee Istanbul
Wadada Qeexitaanka ee Canal Istanbul
Kanaalka Kanal ee Istanbul, oo loogu yeero musiibo deegaanka ah
Wareegga Channel ee loo yaqaan "Istanbul Channel"
Lütfi Elvan: Khariidadda jidadka ee Kanal Istanbul ayaa dhowaan lagu dhawaaqi doonaa
Faahfaahinta Kanal Istanbul ayaa noqotay mid cad
Wasaaradda Ganacsiga iyo Isgaadhsiinta Somaliland
Waddada Channel Istanbul waxay ku beddeshay godka qadiimka ah
Channel waxay la yaaban tahay wadada cusub ee Istanbul
Mowjadaha Isbedelka Waddada Canal Istanbul
Route Channel ee Route wuxuu bedelayaa qaddiyadda Arnavutköy
Khadka Isku-xirka ee Seksi-Sultanbeyli
Immisa buundooyin ayaa laga dhisi doonaa Istanbul
Channel Imisa mitir oo cubic oo qodis ah ayaa ku sugan Istanbul
Basaska tagaya Sultanbeyli
Dhibaatada gaadiidka ee Sultanbeyli